Ireland vs Zimbabwe 5th T20I 2021 Highlights -->
Ireland vs Zimbabwe 5th T20I 2021 Highlights
Watch the highlights of Ireland vs Zimbabwe 5th T20I 2021 - Zimbabwe tour of Ireland 2021 played at Bready Cricket Club, Magheramason, Bready.
Cricket Highlights - Ireland vs Zimbabwe 5th T20I 2021
Watch the highlights of Ireland vs Zimbabwe 5th T20I 2021 - Zimbabwe tour of Ireland 2021 played at Bready Cricket Club, Magheramason, Bready on Sept 04, 2021.
Luke Jongwe picked up 3-wickets
Craig Ervine's unbeaten half-century, followed by three-wicket hauls from Luke Jongwe and Donald Tiripano, propels Zimbabwe to a tight 5-run victory against Ireland in the fifth T20I, closing the series lead to 3-2.
This is the fourth time Ireland has failed to chase down a target of less than 130 in a complete 20-over game, and the second time they have failed to chase down a target of less than 130 in T20Is versus Zimbabwe.
Zimbabwe's 124 was their third-lowest score in T20 internationals against Ireland.
Ireland's 119 was their second-lowest score in T20 internationals versus Zimbabwe.
Zimbabwe's 5-run triumph was their third-tiniest victory in T20Is in terms of runs, and their second-tiniest victory over Ireland in T20Is.
Zimbabwe's total of 124 for 4 is their fourth-lowest in T20 internationals and their second-lowest against Ireland.
Craig Ervine's 67 not out, Dion Myers (26), and Milton Shumba (14 not out) significantly helped to Zimbabwe's 124-4 in 20 overs.
Ireland's top bowler Mark Adair grabbed three wickets for 23 runs in four overs, while Josh Little claimed one wicket.
Ireland scored 119 for all-out, with Neil Rock (22), Paul Stirling (19), and Shane Getkate (15) scoring the most runs in 20 overs,
Zimbabwe's bowler Donald Tiripano, Luke Jongwe, and Richard Ngarava, Wellington Masakadza, each took three wickets.
Craig Ervine named Player of the Match for his outstanding batting effort in which he hit an unbroken 67 runs off 57 balls with a strike rate of 117.54.